Best Madasha khadka tooska ah ilaa iyo 2004
more ...104 luqadood oo isticmaale ayaa la heli karaa
Isdiiwaangalin gole bilaash ah
Xullo u samee magaca koontada (hoosaadkaaga) oo buuxi cinwaanka emaylkaaga. Maskaxda ku hay in furahaaga eraygaaga furaha ah loo diri doono cinwaanka emaylkaaga. Waligaa kama heli doontid spam ama xayeysiin anaga naga ah. Si kastaba ha noqotee, way dhici kartaa in emaylka leh lambarkaaga furaha ah ee maamulaha loo wareejiyo faylkaaga spam.
Halkaan waxaad ka heleysaa gole gebi ahaanba bilaash ah oo leh astaamo badan. Abuur mashiin raadin bilaash ah, madal bilaash ah, dhakhso leh oo fudud daqiiqado yar gudahood, dammaanad qaad bilaash ah. Waad beddeli kartaa midabyada, waxaad ku wareejin kartaa darajooyin, waxaad mamnuuci kartaa isticmaaleyaasha, waxaad abuuri kartaa kooxo iyo waxyaabo kaloo badan. Abaabulka kulankaaga ayaa si buuxda otomaatig ah u ah, xoogaa ilbiriqsiyo gudahood ah markii aad gasho golagaaga si buuxda ayaa loo shaqeynayaa, isla markiiba waad u heli kartaa isla markaana aad la jaan qaadi kartaa himilooyinkaaga iyo fikradahaaga. Naftaada ka badbaadi dhibaatada iyo shaqada rakibaadda kulan ee kombuyuutar. Madax xanuun ku saabsan helitaanka, taraafikada iyo dayactirka ayaa ah waxyaabihi hore ee aad la yeesheen golahaaga.
Magaca Koontada [A-z iyo 0-9]: .freeboard.at
Diiwaangelintaada waad ku aqbali kartaa Shuruudaha isticmaalka.
Halkaan waxaad ka heleysaa gole gebi ahaanba bilaash ah oo leh astaamo badan. Abuur mashiin raadin bilaash ah, madal bilaash ah, dhakhso leh oo fudud daqiiqado yar gudahood, dammaanad qaad bilaash ah. Waad beddeli kartaa midabyada, waxaad ku wareejin kartaa darajooyin, waxaad mamnuuci kartaa isticmaaleyaasha, waxaad abuuri kartaa kooxo iyo waxyaabo kaloo badan. Abaabulka kulankaaga ayaa si buuxda otomaatig ah u ah, xoogaa ilbiriqsiyo gudahood ah markii aad gasho golagaaga si buuxda ayaa loo shaqeynayaa, isla markiiba waad u heli kartaa isla markaana aad la jaan qaadi kartaa himilooyinkaaga iyo fikradahaaga. Naftaada ka badbaadi dhibaatada iyo shaqada rakibaadda kulan ee kombuyuutar. Madax xanuun ku saabsan helitaanka, taraafikada iyo dayactirka ayaa ah waxyaabihi hore ee aad la yeesheen golahaaga. Shuruudaha adeegsiga astaanta ayaa la adeegsan doonaa.